Ndị na-ere ahịa azụmaahịa kachasị mma maka uru kachasị! Ọnwa Nke Anọ 2021
Mụọ 2 Ahịa 2021 Ntuziaka Na Ahịa Social!
Tradingzụ ahịa mmekọrịta ọha na eze bụ ihe ọhụrụ dị na ebe ntinye ego n'ịntanetị. Na a nutshell, online agbanwe na-akwado na-elekọta mmadụ trading atụmatụ-enye gị ohere itinye aka na ndị ọzọ na-azụ ahịa nke saịtị. Nke a ga - enyere gị aka isoro ndị ọgbọ ibe gị kpaa maka ohere ịzụ ahịa ịzụ ahịa, yana ịmụ ma melite ihe ọmụma banyere itinye ego na ya.
Platformsfọdụ nyiwe itinye ego n'ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ na-aga n'ihu, na-enye gị ohere idetuo ọrụ ndị ọrụ ndị ọzọ. N'ime ime nke a, ị nwere ohere ịnweta ego na-enweghị ego na-enweghị mkpa ibuli mkpịsị aka gị.
Ichoo ka ichotakwu banyere ahia ahia? Ọ bụrụ otu a, anyị na-anabata gị ka ị gụọ Anyị Mụọ 2 Trade 2021 Guide On Social Trading. Ọ bụghị naanị na anyị na-ekpuchi ins na outs nke otu esi azụ ahịa mmekọrịta na-arụ ọrụ n'ezie, mana anyị na-atụle nyiwe kachasị mma ugbu a na-arụ ọrụ n'ahịa.
Mara: Naanị cheta, ọ bụ ezie na ndị otu na-azụ ahịa azụmaahịa nwere ike ịsị na ha maara ihe ha na-ekwu, ị kwesịrị ị na-eji obere nnu were ndụmọdụ ndị ọzọ. Kama, ikwesiri ilekwasị anya na ndị otu nwere ndekọ egwu a na-achọpụta na uru dị ogologo oge!
Gịnị bụ Social Trading?
Dị ka aha na-egosi, na-elekọta mmadụ trading bụ ụdị nke ahia n'ịntanetị nke ahụ ga - enyere gị aka iso ndị ọzọ na saịtị ahụ ‘na-akpakọrịta’. Site na nke a, anyị na-ekwu na ị ga-eso ndị ọrụ ndị ọzọ nke otu ụlọ ọrụ na-eme mkparịta ụka nwere ike ịzụ ahịa, yana ịza ajụjụ ọ bụla n'ihu ọha.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị nwere mmasị ịzụ ahịa mmanụ. Site na ịgafe ngalaba mmanụ nke onye na-ere ahịa, ị ga-elele echiche na echiche nke otu ndị otu ọzọ si eche na ahịa ga-aga. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike kpebie ịnye echiche gị banyere ahịa mmanụ, nke n'aka nke ya, ga-ahụ ka ndị otu ọzọ na-aza ajụjụ.
N'ụzọ dị oke mkpa, ọ dị mkpa iburu n'uche na saịtị ndị na-elekọta mmadụ abụghị naanị ebe nrụọrụ weebụ na-enye gị ohere ikwurịta echiche ịzụ ahịa. N'ụzọ megidere nke ahụ, ha bụ nyiwe azụmaahịa zuru oke na-enye gị ohere ịzụta, ree, na azụmaahịa ọtụtụ puku akụ. N'ezie, nke a bụ isi okwu nke ikpo okwu, yana akụkụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka mgbakwunye azụmaahịa gị.
Ihe ozo kwesiri ileba anya na mkparita uka banyere ahia mmadu bu na ufodu nyiwe na-akwado ahia ahia. Nke a bụ ebe ị ga-esi na-egosipụta azụmaahịa nke ndị ọrụ ndị ọzọ na saịtị dị ka-iji-dị ka. Get ga - ahọrọ ndị ọchụnta ego ịchọrọ ịchọọ, yana ihe ị ga - achọ ekenye na pọtụfoliyo ahụ.
Uru na ọghọm nke Social Trading
Soro ndi ahia ozo kwurita okwu banyere ulo ahia
Mụta ma melite ihe ọmụma azụmaahịa gị
Gwa ndi okacha mara ahia nke nwere onu ogugu nke inweta uru
Gosipụta ahịa nke ndị ọzọ na-etinye ego site na Detuo ahia
N'elu nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ị nwere ohere ịnweta ọtụtụ puku akụrụngwa ego
Ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ na-akwado debit / kaadị akwụmụgwọ na ịkwụ ụgwọ e-obere
Mfe na-enwe mmetụta na-akpọ ndị ọkachamara na-azụ ahịa
Enweghị nkwa ọ bụla na usoro ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ ga-akawanye nka gị
Ọtụtụ ndụmọdụ na-adịghị mma na-ese n'elu mmiri
Kedu ka ahia ahia na-aru?
Nke mbu - na dika anyi kwurula na mbu, ebum n’uche banyere ebe ahia mmadu di otu ihe dika uzo ozo ndi ozo - i no ebe ahu inweta ego. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-emepe akaụntụ na onye na-ere ahịa n'ịntanetị, bulite ID ụfọdụ, tinye ego, wee họrọ itinye ego gị na Mee N'onwe Gị.
Site na nke ahụ, ị ​​ga-enwezi akụkụ mmekọrịta nke ikpo okwu iji nweta. Olileanya, nke a ga-akpụzi gị ka ị bụrụ onye ahịa kachasị mma ma nyere gị aka itinye ego gị na ọkwa ọzọ.
Profaịlụ ahia ahia
Zọ kachasị mfe iji bulie isi gị n’ahịa gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ iche echiche banyere otu usoro mgbasa ozi ọdịnala ọdịnala dị ka Facebook si arụ ọrụ. Dị ka ị nwere ike ịma, ihe niile bụ ọ gwụla ma ị na-agwa mmadụ okwu site na njirimara ozi nkeonwe. Nke a gụnyere ike ịpị profaịlụ nke mmadụ ma chọpụta ozi ndị ọzọ gbasara ha.
N'ihe banyere ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe, ọ gwụla ma ị kpebiri ịdebe profaịlụ gị na nzuzo, ndị ọzọ nọ na saịtị ahụ ga-ahụ ọrụ itinye ego gị. Nke a dị mma maka gị dịka onye na - etinye ego ọhụrụ, ebe ị ga - enyocha ihe akụ ndị ahịa azụmaahịa na - azụ ma na - ere.
Ofdị ozi ị ga-enweta gụnyere:
Aha njirimara nke onye na-ere ahia (enweghị ozi onwe onye)
Foto nke onye ahia
Nsonaazụ ahịa akụkọ ihe mere eme
Ọkwa dị egwu
Pọtụfoliyo dị ugbu a
Site na iji oge ụfọdụ nyochaa profaịlụ nke onye ahụ, ị ​​ga-achọpụta etu onye ahịa ahụ si nwee ihe ịga nke ọma.
Chọta Ndị Ọka Ọkachamara
Oghere itinye ego na ntanetị jupụta na ihe akpọrọ 'ndị ahịa azụmaahịa'. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime 'ndị ọkachamara' a abụghị ndị ọkachamara n'ezie. Dị ka ọ na-adịkarị, ọ ga-esiri ike ịtụle ịtụkwasị obi nke onye na-azụ ahịa n'onlinentanet. Iji maa atụ, oge na oge anyị na - ere ndị ọchụnta ego na Instagram na YouTube na soro ịgbaso, naanị ịmara na ha anaghị aga nke ọma dịka ha dị.
Ozi ọma ahụ bụ na usoro ntanetị mmekọrịta mmadụ na 100% gosipụtara. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-enyocha azụmahịa ọ bụla onye ọrụ mere kemgbe ha sonyere na ikpo okwu. Enweghị ike ịgbanwe ma ọ bụ gbanwee ozi a n'aka onye ahịa ahụ, ebe ọ bụ na data dabere na ọrụ ịzụ ahịa n'ezie. Dị ka ndị dị otú a, ị nwere ike imebi ozi ahụ na akụkọ dị mfe iji gụọ, nke na-enye gị ohere ịlele etu onye ahịa ahụ si nwee ihe ịga nke ọma.
Ozugbo ịchọtara onye ahia nke ị masịrị ọdịdị gị, ịnwere ike ịgbakwunye ha na ndepụta ndị enyi gị - dịka ị ga-eji Facebook ma ọ bụ Twitter. Mgbe nke ahụ gasị, ịnwere ike ịdebe taabụ na ihe niile ha na-eme n’elu ikpo okwu!. Nke a gụnyere azụmaahịa na-aga n'ihu, yana okwu ọ bụla ha biputere n'ihu ọha.
Mgbakọ zuru ezu
Ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ dịkwa oke mma maka ịkọwa echiche zuru ezu na klas ndị a kapịrị ọnụ. Were eToro dị ka ihe atụ kachasị. Ihe ntanetị dị n'ịntanetị na-enye gị nkwụsị pasent nke ebe ego na-aga na saịtị ya. Nke a bara uru, ọkachasị mgbe ị tụlere na eToro bụ ebe obibi karịrị ndị ahịa 12 nde.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ị na-anwa ịtụle obere oge ntụzi nke ọla edo. Ọ bụrụ na ndị na-elekọta mmadụ trading saịtị na-ekwu na 97% nke ego a na-etinye na-ere iwu, mgbe ahụ ị maara na mkpokọta echiche na gold dị oke bearish. Mgbe o kwusịrị nke ahụ, ọ ga-abụ na ndị na-emegide iwu n'elu ikpo okwu ga-emegide echiche ahịa ahụ site n'itinye iwu ịzụta!
Okwu Ihu Ọha
Anyị nwere mmasị na mkparịta ụka ọha na eze ị hụrụ na saịtị azụmahịa. Nke a na - enye gị ohere isoro ndị ahịa ndị ọzọ na - ekwu okwu n’elu ikpo okwu, n’echiche ịchọpụta ụzọ ndị mmadụ siri chee na ahịa na - aga. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị nwere mmasị ịzụ ahịa ebuka Apple.
Site na ịga na ibe azụmaahịa dị iche iche, ị ga-ahụ otu mkparịta ụka. Nke a adịghị ka ihe dị iche na ntanetị na Facebook, ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-ebido mkparịta ụka ahụ site na ịdee echiche, mgbe ahụ ndị ọzọ nwere ike isonye na ntughari site na ịhapụ nzaghachi.
Ihe ị ga - ahụkarị bụ na ndị na - etinye ego n ’oge ha ga - ahapụ nyocha miri emi banyere akụnụba, otu ụzọ ha siri chee na ọ ga - aga, yana ọ dị oke mkpa - ihe kpatara kpatara amụma ha. N'otu aka ahụ, ị ​​ga-ahụkarị ndị mmadụ na-atụle isi ihe nyocha ha.
Dị ka atụmatụ ndị a dị n'elu, anyị ga-arụ ụka na nnukwu uru nke isonye na azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ikike 'idetuo azụmaahịa'. Ma ọ bụghị ya akpọrọ 'akpaghị aka trading' ma ọ bụ 'mirror ahia', usoro-enye gị ohere idetuo ahia nke ndị ọrụ ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na onye na-etinye ego na saịtị ahụ nwere ndekọ ndekọ dị ịrịba ama n'ịzụ na ire ebuka US. Wantchọrọ itinye otu ụdị azụmaahịa dịka ha, dabere na ego ị nwere ike imeli. Can nwere ike mezuo nke a na pịa bọtịnụ na saịtị azụmaahịa mmekọrịta, yana n'ọtụtụ ọnọdụ - agaghị akwụ gị ụgwọ ihe ọ bụla.
Ka anyị lee ihe atụ nke otú oyiri trading na-arụ ọrụ.
1. Chọta Ahịa That Chọrọ Copyomi
Ebe mbido ọdụ ụgbọ mmiri gị bụ ịchọta onye na-azụ ahịa nke masịrị gị. Site na iduzi ikpo okwu na-elekọta mmadụ eToro ugbu a na-akwado 12 nde ndị ahịa, ị ga-achọ nyocha siri ike. Ọ dabara nke ọma, ị nwere ike ibelata ọchụchọ gị site na iji nzacha.
Offọdụ metrik ị kwesịrị ilekwasị anya bụ:
Akụ: Lee anya ka ị hụ ụdị akụ onye ọrụ ọpụrụiche ahụ dị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ naanị ha na-azụta ebuka, ka ọ bụ na ha na-achọ iji ụzọ dị iche iche esi etinye ego?
Oge na nyiwe: Ga - achọ ilekwasị anya na ndị ahịa nwere ogologo oge na - enweta uru na - aga n'ihu. Dịka, naanị n'ihi na onye ahịa ahụ nwetara ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na ọnwa mbụ ha na-anwa, nke a apụtaghị na ị kwesịrị i copyomi ha. Kama, họrọ maka ndị ahịa na-arụsi ọrụ ike na saịtị ahụ ọtụtụ afọ.
Uru: N'ezie, ị ga-achọkwa ịchọpụta etu onye ahịa ahụ siri nwee ihe ịga nke ọma. Zọ kachasị mma iji chọpụta nke a bụ ileba anya na chaatị kwa ọnwa. Nke a na - enye gị ohere ịhụ uru na ọghọm onye ahịa ahụ mere n’ime ọnwa kalenda ọ bụla kemgbe ha sonyeere saịtị ahụ. Oge ọnwa ndị ọzọ na-acha akwụkwọ ndụ ka mma.
Egwu: Tradinglọ ọrụ ntanetị dị ka eToro na-ekenye onye ọrụ ọ bụla ihe egwu. Nke a bụ ọkwa akpaaka nke dabere na ụdị ahịa ndị mmadụ na-eme, n'akụkụ ego ha na-etinye n'ihe metụtara njikwa akaụntụ ha. Leverage ga-arụ ọrụ. Ọ kachasị mma ịghara ịdabere naanị na ọkwa njirimara akọwapụtara. Kama nke ahụ, nyochaa ihe ize ndụ zuru oke nke onye na-ere ahia site na ịgagharị usoro akọwapụtara na mbụ.
Onu ogugu ndi ahia ahia: A na-elegharakarị ya anya, ọ bara uru ịhụ ọtụtụ ndị ọrụ na saịtị ahụ na-edepụta onye ahịa ahụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị sayensị, ndị ahịa nwere ọtụtụ ihe na-esokarị na-eme ya n'ihi na ha na-enweta uru mgbe niile. Nke a na-etinyekwa nrụgide ọzọ n’ahịa ahụ, ka ndị mmadụ na-esoro ha, ego ha na-akpata.
2. Họrọ Oke Osisi gị
Ozugbo ịchọtara onye ahia ịchọrọ idetu, mgbe ahụ ị ga-achọ ịchọpụta ego ole ị chọrọ ịkụ. Tradinglọ ọrụ ntanetị na-eji usoro eji eme ihe, nke pụtara na oke osisi gị ga-adị ka otu pọtụfoliyo ị na-edegharị.
Ka anyị kwuo na ịchọrọ idetuo onye na-ere ahịa nke nwere ebuka 5 na pọtụfoliyo ha
Iji mee ka ihe dị mfe, anyị ga-ekwu na ahia ahụ ekenyela $ 100 na 4 x ebuka dị iche iche, na $ 600 na ngwaahịa 1 x.
Nke a na - ewe pọtụfoliyo niile na $ 1,000
Agbanyeghị, ịchọrọ naanị itinye $ 100 - nke pụtara 10% nke uru pọtụfoliyo ahụ n'ezie
Dị ka ndị dị otú a, pọtụfoliyo gị ga-enwe 4 x ebuka na osisi nke $ 10, yana 1 x ngwaahịa na $ 60.
Dị ka ị pụrụ ịhụ site n'elu, e nyere gị nhọrọ nke iyingomi pọtụfoliyo niile site na otu ịpị. Ọzọkwa, ị họrọkwara etu ị chọrọ itinye ego na ngụkọta - yana ịzụ ahịa ndị ahụ n'otu ọkwa ahụ dịka onye ị diri.
Na nke ahụ kwuru, ịkwesighi idetuo pọtụfoliyo dị ugbu a ma ọ bụrụ na ịchọghị. Kama, ịnwere ike ịhọrọ i copyomi azụmahịa niile ga - eme n’ọdịnihu. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịhọrọ maka ha abụọ.
3. alizingghọta Uru G ritere
Uru ọ bụla ị ritere site n’iso onye ọrụ azụmaahịa ọzọ ga -eche onye ọ bụla ị na-e copomi. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na oge nke July 2020, onye ahịa ahụ na-enweta uru 4%.
N'agbanyeghi ego ole onye ahia ahụ riri, uru 4% gbakọrọ gị Pọtụfoliyo. N'ịnọgide n'otu ihe atụ ahụ dị n'elu, nke a pụtara na pọtụfoliyo ijeri $ 100 gị gaara eme $ 4 uru na July 2020.
Agbanyeghị, ewepu ego a na-akwụ ụgwọ n'ụdị nkewa ma ọ bụ ego ịkwụ ụgwọ, ị ga-achọpụta uru gị naanị ma ọ bụrụ na ịga n'ihu mechie ahịa ahụ. Ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa nnomi anaghị eme nke a n'onwe ha, mgbe ahụ ị ga-eji aka gị mee ya.
4. Usoro Mgbasa
Otu n'ime ihe kachasị mma banyere saịtị azụmaahịa dịka eToro bụ ọnụọgụ ọnụọgụ nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ. Ihe nke a pụtara gị bụ na ị ga-enwe ọtụtụ puku ndị ahịa bara uru iji detuo.
N'iburu nke ahụ n'uche, nke a na-enye gị ohere ịmepụta pọtụfoliyo dị iche iche nke ndị ahịa oyiri. N'ime nke a, ị ga - enwe ohere kachasị mma iji kpuchido onwe gị n'aka onye ahịa nke nwere ọnwa ọdachi.
Otu njirimara dị oke mkpa nke itinye aka na azụmaahịa azụmaahịa na-akpaghị aka bụ na usoro ntinye ego niile na-agafe. Nke a pụtara na ị na-akwụ ohere ịnweta ego na ngwụcha ọnwa ọ bụla, n’enweghị mkpa ịrụ ọrụ ọ bụla siri ike. Kama, ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ ndị ahịa ịchọrọ idetuo, yana usoro azụmaahịa na - elekọta ndị ọzọ.
Uru nke Gghọ Guru na-ere ahịa
Ọ bụ ezie na anyị lekwasịrị anya na uru nke nyiwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na nke onye na-etinye ego ọhụrụ, gịnị bụ n'ime ya maka ndị nwere ọkaibe azụmaahịa? A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na ị ga-enwe ike ịkarị ahịa karịa, ị ga-achọ n'ezie ka mmadụ niile mara ihe nzuzo nzuzo gị bụ?
Ọfọn, ndị ahịa nwere oge ga-enwe ike ịmekwu ego ha na-enweta mgbe ha kwere ka ndị ọzọ copyomie ọrụ ha. N'ọtụtụ oge, usoro ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-akwụ onye ọrụ ahụ ọrụ mgbe ụfọdụ akara ngosi dị mkpa. Nke a na-abụkarị ọnụọgụ ndị ọrụ na-edepụta onye ahịa ahụ, yana olu nke akụ n'okpuru njikwa (AUM).
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na onye ahịa ahụ nwere mmadụ 100 na-edegharị ha, pọtụfoliyo ọ bụla ruru $ 1,000. Nke a pụtara na AUM niile dị $ 100,000. Ọ bụrụ na saịtị azụmaahịa na-akwụ ụgwọ ọrụ nke 1%, nke a ruru $ 1,000 ọzọ.
N'ụzọ dị oke mkpa, onye ahịa ahụ na-enwetakwu ego maka ime ihe ha ga-eme, yabụ ọ bụ ọnọdụ mmeri maka ndị otu a metụtara.
Ndụmọdụ iji kpata ego na saịtị azụmahịa
Y’oburu n’icho uda nke ahia aka, ma ịmaghi ebe ị ga - ebido, n’okpuru ị ga - ahụ ụfọdụ ndụmọdụ ga - enyere gị aka ị ga - enye onwe gị ohere kacha mma ị ga - enweta ego.
Debe ụfọdụ Ngalaba
Mgbe ọ na-abịa n'ịchọta ndị ahịa bara uru iji detuo, ọ dị mkpa ka ịtọọ ụfọdụ ntọala. Site na nke a, anyị na-ekwu na ị ga-eji oge ụfọdụ na-eche maka ihe kacha nta ịchọrọ ka onye ahịa ahụ zute. Dịka ọmụmaatụ, ebe mmalite dị mma bụ naanị ịtụle ndị ahịa nwere ndekọ egwu ma ọ dịkarịa ala otu afọ.
Iji jide n'aka na nsonaazụ onye ahịa ahụ abụghị ihe na-enweghị isi, ị nwere ike ịchọrọ nke a ruo afọ abụọ. Ihe mgbakwunye ọzọ ịchọrọ ịlele bụ ọkwa dị egwu onye ahịa. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịtụle profaịlụ dị ala na ọkara, ị nwere ike ịjụ ndị na-adaba n'okporo ụzọ dị oke egwu.
Ikwesiri iche echiche banyere ụdị akụ ịchọrọ ịme. Dịka ọmụmaatụ, naanị n'ihi na onye ọrụ emeela ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-azụ ahịa Bitcoin na Ethereum karịa ọnwa iri na abụọ gara aga, ọ bụrụ na obi anaghị eru gị ala itinye ego na cryptocurrencies; emela.
Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime gị nwere ike inwe mmasị karịa na akụ na-akpata ego - dịka ebuka na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ agbụ. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, gbado anya na ndị ahịa na-elekọta mmadụ nke na-ejidekarị akụ na-akpata ego.
Na-ebugharị gafee ọtụtụ ndị ahịa na Akụ nke Akụ
Ọ bụ ezie na anyị tụlere nkenke oge dị nkenke na mbido, anyị enweghị ike imesi ike otu mkpa ọ dị. N'ezie, a dụrụ gị ọdụ ka ị gbasaa gafee ọtụtụ ndị ahịa na klas akụ. Banyere nke mbụ, ọ bara uru i copomi ọtụtụ ndị ọrụ dị iche iche.
Thiszọ a, ọ bụrụ na onye ọrụ ma ọ bụ abụọ nwere ọnwa ọjọọ - mana ndị ọzọ mechara rụchaa uru, ọ ga-abụ na ị ka nọ na-acha akwụkwọ ndụ. Na nke ikpeazụ - site na ịkwado ndị ahịa nke pụrụ iche na klas dị iche iche dị iche iche, nke a ga-eme ka atụmatụ ịgbasawanye gị dịkwuo elu. Dịka ọmụmaatụ, nke a nwere ike ịgụnye ebuka, ETFs, agbụ gọọmentị, na ngwaahịa.
Pọtụfoliyo Dị arọ
Ọ dịkwa mma iche echiche banyere ịmepụta pọtụfoliyo dị arọ nke ndị ahịa oyiri. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị ahịa ga-eji ụzọ 70/20/10 tinye aka n'ihe egwu. Nke a bụ ebe 70% nke pọtụfoliyo gị na-adabere na ndị ahịa nwere akara dị ala, 20% ọkara, yana 10% dị elu.
Na ịgbaso usoro dị otú ahụ maka ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ị nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ego gị na ndị na-etinye ego n'ihe ize ndụ. Agbanyeghị, enwetala ntakịrị ego ekenye ndị na-etinye ego n'ihe ize ndụ karịa - naanị na ọ ga-adịrị ha mma.
Kedu otu esi ahota saịtị ahia ahia?
Achọ a ọhụrụ na-elekọta mmadụ trading saịtị ebe ị nwere ike netwọk na ahia n'otu oge? Ọ bụrụ otu a, anyị ga-atụ aro isoro usoro ndị akọwapụtara n'okpuru.
Metric kachasị mkpa ịchọrọ ịtụle bụ ma enyere ikikere azụmaahịa na-elekọta mmadụ nwere ikike. A sị ka e kwuwe, a ga-achọ ka ị tinye ego ụwa n'ezie n'elu ikpo okwu, yabụ, ọ dị oke mkpa na ịchekwa otu anụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, na-eduga saịtị azụmahịa eToro nke ndị na-achịkwa na UK, Australia, na Saịprọs nyere ikikere - yabụ na ego gị dị mma n'oge niile.
Ga-ahọrọ saịtị azụmahịa na-elekọta mmadụ nke na-akwado usoro ịkwụ ụgwọ kachasị amasị gị. Ma nke ahụ bụ kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ, e-obere akpa, ma ọ bụ akaụntụ akụ - gbaa mbọ lelee nke a tupu ịdebanye aha.
Ọ bụrụ na ị na-esonye na saịtị azụmaahịa n'ihi na ịchọrọ ịnye otu azụmaahịa na-aga, wee hụ na ikpo okwu bụ 100% transperent. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, mgbe ị na-enyocha ọrụ onye na-azụ ahịa ị na-atụle ị copomi, ịkwesịrị inwe ike ịlele azụmaahịa ọ bụla ha mere.
✔️ Mfe Reporting
On top of being 100% transperent, ị kwesịrị ị na-ahọrọ a na-elekọta mmadụ trading saịtị na-enye gị ohere ele ọnụ ọgụgụ na mfe na-agụ n'ụzọ. Dịka ọmụmaatụ, nyiwe kachasị mma ga-emebi nsonaazụ azụmaahịa na ọnwa n'ọnwa. N'ụzọ ahụ, ị ​​ga-ahụ etu esi agbanwe agbanwe oyiri ahia na ajụjụ bụ.
Echefula, ị ga - azụrịrị ala nke ụwa, yabụ kpachara anya nyochaa ọtụtụ akụrụngwa ị ga - enweta. Ka emechara, ị chọrọ na-eke a ukwuu iche iche Pọtụfoliyo nke oyiri ahịa, otú ị ga-achọ ịnweta dị ka ọtụtụ akpan owo klas dị ka o kwere.
Ego na isslọrụ
Ọbụghị naanị na ịchọrọ iji ego azụmaahịa na akaụntụ, mana enwere ike ịgba gị ụgwọ ka iji jiri akara azụmaahịa ahụ. N'ihe banyere eToro, ị gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla ma ọlị iji gosipụta ahịa nke ndị ọrụ ndị ọzọ. Agbanyeghị, ọtụtụ saịtị azụmaahịa na-elekọta mmadụ ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ mgbe ị na-edegharị azụmaahịa, yabụ kpachara anya ịlele a.
Ebe nrụọrụ ahia kacha mma nke 2021
Dị ka ụda nke azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe, ma chọọ ịmalite na akaụntụ ugbu a? Ọ bụrụ otu a, ị ga-ahụ ebe anyị depụtara aha anyị n’elu.
1. eToro - Onye Pioneer nke Social Trading
Emehiela banyere ya, eToro bụ usoro azụmaahịa kachasị mma na oghere - site na obodo mile. N'ezie, ikpo okwu bụ otu n'ime ndị na-ere ahịa na ntanetị n'ịntanetị iji webata echiche mmekọrịta mmadụ na nke oyiri. Nke mbu, eToro nwere ihe karịrị nde mmadụ iri na abụọ na-arụ ọrụ, nke pụtara na ị nwere nnukwu data gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe gị. Nke a na-abịa n'ụdị mkparịta ụka ọha na eze, ebe ị ga-ahụ ọnọdụ ndị ahịa ndị ọzọ na-achọ iwere na ntọala akụ na ụba. Naanị ezigbo cryptos dị na US.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị gabiga Nike na-ekere òkè na peeji nke ahia na eToro, ị ga-eji ọtụtụ akwụkwọ, nkwupụta, na arụmụka mara gị ahụ ma ngwaahịa ahụ ọ bara uru ịzụta ma ọ bụ ire. Also ga-ahụ echiche ahịa n'ahịa ọ bụla, nke na-agwa gị ebe ego ahụ na-aga. Na nke ahụ kwuru, ihe ngosi kachasị ọhụrụ na eToro bụ nke nhọrọ ịzụ ahịa ya. Nke a na - enye gị ohere ịchọta onye na - azụ ahịa nke ịchọrọ ịdị ka ya, wee dezie pọtụfoliyo ha site na iji otu ịpị.
N'ụzọ dị oke mkpa, enweghị ụgwọ ọ bụla iji detuo ndị ahịa ndị ọzọ na eToro, nke dị mma. N'ihe gbasara ihe ndị bụ isi, imeghe akaụntụ na eToro na-ewe ihe nkeji. Ozugbo i webatara otu ID gị, ịnwere ike itinye ego na kaadị debit / kaadị, e-obere akpa, ma ọ bụ akaụntụ akụ. Nhọrọ nkwụnye ego niile bụ n'efu, ọ bụ ezie na ị ga-ezute ego kacha nta nke $ 200. Ozugbo edoziri gị niile, ị nwere ike zụta ma ree ọtụtụ puku akụ.
Nke a gụnyere ihe niile sitere na ebuka, cryptocurrencies, indices, ETFs, na ọla edo. N'ọtụtụ oge, ị gaghị akwụ ụgwọ ụgwọ azụmahịa ọ bụla n'elu ikpo okwu karịa mgbasa. Naanị oge ị ga-akwụ ụgwọ bụ ma ọ bụrụ na ị naghị ere ngwa ngwa, ma ọ bụ tinye itinye ego. N'ihe banyere iwu, e FCoro, FCS, na ASIC nyere ikikere. Dika odi, itinye ego gi n’adighi nma n’oge obula.
67% nke ihe ndekọ ego ndị na-ere ahịa na-efufu ego mgbe ha na ndị na-eweta ọrụ CFD na-azụ ahịa. I kwesiri ịtụle ma ị ga - enwe ike ibute nnukwu nsogbu nke idafu ego gị
Na nchịkọta, mmekọrịta azụmahịa na-elekọta mmadụ ewerewo nnukwu ụlọ ahịa na-ere ahịa site na mmiri na-adịbeghị anya. Na oge ọ bụghị ogologo oge gara aga, ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ga-eche ngwaahịa ha ka ọ bụrụ ụdị onye na-etinye ego. Ihe agbanweela ọtụtụ ihe kemgbe ahụ, yana ọtụtụ nyiwe ugbu a na-eso ndị isi yiri nke ahụ na saịtị mgbasa ozi dịka Facebook na Twitter.
Nke a dị mma ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa ọhụụ, ebe ị na-enweta ọtụtụ ihe ọmụma na gburugburu ebe obibi. N'otu aka ahụ, ị ​​na-enwetakwa ohere ị ga-enweta ego na-abaghị uru site n'itinye aka na ndị ọrụ ndị ọzọ. Site na nke a, ị ga-eme ọrụ ụlọ n'ụlọ onye na-ere ahịa tupu ị tinye ego gị.
Na ngwụcha, ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta ụdị azụmaahịa mmadụ na-adị, anyị nwere olile anya na ntuziaka miri emi ejirila ihe ọmụma niile ị ga-aga n’iru. Anyi egosiputala gi na uzo nke uzo ahia anyi di elu - eToro. Site na imeghe akaụntụ na ore ahia, ị nwere ike ịbụ azụmaahịa mmekọrịta na nkeji nkeji!
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti na-elekọta mmadụ trading na oyiri ahia?
Ọ bụ ezie na ha nwere njikọ chiri anya, ha na-ezo aka n'ihe abụọ dị iche. N'ihe banyere ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke a bụ usoro iso ndị ahịa ndị ọzọ na-ekwurịta, na-arụrịta ụka ma na-akparịta ụka n ’ụzọ ọha na eze - dịka ị ga-esi na saịtị mgbasa ozi dịka Facebook. Detuo ahia - nke dara n'okpuru nche anwụ nke ịzụ ahịa mmekọrịta, bụ usoro nke gosipụtara ọrụ nke ndị ọrụ ndị ọzọ.
Kedu usoro mgbasa ozi mmekọrịta kacha mma?
eToro bu ahia ahia kacha mma na uzo ahia na oghere. Ruo mgbe onye asọmpi a ga-ekwenye na ya ga-abịa, eToro ga-anọgide na-achịkwa ohere ahụ.
Kedu otu m ga-esi ahọrọ onye na-ere ahịa nnomi?
E nwere ọtụtụ ihe ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa ka ọ na-enyo. Nke a gụnyere ogologo oge onye ahịa ahụ nọ na saịtị ahụ, uru ha bara uru na ọnwa n'ọnwa, yana ọkwa ihe egwu ha.
You ga-akwụ ụgwọ iji jiri azụmaahịa na-elekọta mmadụ?
N’ọtụtụ ikpe, mba. Echefula, saịtị azụmahịa na-elekọta mmadụ ka bụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị. Kedu otu ndị na-ere ahịa n'ịntanetị si enweta ego? Mgbe ị na-azụ ahịa! Dịka, ịnwere ike imeghe akaụntụ ma tinye ego na-akwụghị ụgwọ.
Enwere m ike ịmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya?
Ọtụtụ mgbe, ee. Agbanyeghị, nke a nwere ike ịdị aghụghọ mgbe ị na-etinye aka na ikike ịgbazinye ego. Iji maa atụ, okpu ESMA na-ebunye ego na ebuka na 5: 1 na 2: 1 n'otu n'otu, yabụ buru nke a n'uche.
Ndi ahia mmadu na-emebi ikike m
Ọ dịghị ma ọlị. Agbanyeghị na ị nwere ike ịlele ndị ahịa ndị ọzọ na ikpo okwu dị iche iche, ịgaghị enwe ike ịlele ozi nkeonwe ọ bụla. Kama, ị ga-ahụ naanị aha njirimara ha.
Ndi eToro na-akwụ ụgwọ ọ bụla iji detuo ahia?
Ee e, a na-ere ahia na eToro n'efu.